Pegasus waxay sheegtay inay marin u leedahay iCloud, FaceBook, Microsoft iyo adeegyo kale markale. Wararka IPhone
Waxaan mar kale war ka haynaa Pegasus, oo ah aaladda shirkadda Israel ee NSO taas si cad oo aan ciqaab lahayn ayaa loo maleynayaa in lagu jabsado taleefannada casriga ah si sharci-darro ah, laakiin haa, kaliya si aan xogteena uga iibino dowlada lacagta bixisa.
Sida laga soo xigtay Financial Times, NSO Group Technologies waxay xaqiijineysaa taas waxay heli kartaa adeeg kasta oo kaydinta xogta daruuraha ah, oo ay ku jiraan kuwa Apple. Sidee ku heshaa Waxaan kuugu sharaxeynaa hoosta.
1 Sidee Pegasus u shaqeeyaa
2 Maxaan ka qaban karnaa si aan uga hortagno inay na qaadsiiso
3 Apple muxuu ka yidhi arrintan?
4 Dembiilayaasha dadweynaha iyo ciqaabta
Sidee Pegasus u shaqeeyaa
Waxa ugu horreeya ee loo baahan yahay waa in Pegasus lagu rakibo qalabkaaga. Maahan marin caalami ah oo loogu talagalay server-yada la weeraray, laakiin waa in laga helaa aaladda qofka bartilmaameedka u ah, taas Waxay u baahan tahay in la rakibo spyware. Softiweerkan ayaa mas'uul ka ah inuu ka soo cesho aqoonsiga aaladda oo uu u diro server-ka hackers.
Mar alla markay haystaan ​​aqoonsiga marin u helista, kharibayaasha internetka ayaa iska ilaaliya dheji qalabkaaga, oo ay ku jiraan meesha uu ku yaal, iyo inaad iska dhigto inay tahay taleefankaaga casriga ah ee gaarka u ah inuu galo iCloud, Facebook ama adeeg kasta oo kale. Waxay umuuqataa in qaabkan ay u maareynayso in laga fogaado in la ogaado oo la codsado, tusaale ahaan, qodobka laba-geesoodka ah ee ay naga codsato markaan rabno inaan ka galno iCloud banaanka casriga.
Maxaan ka qaban karnaa si aan uga hortagno inay na qaadsiiso
Ma garanayno habka uu Pegasus u adeegsado in uu ku faafiyo qalabkeenna. Waxaa laga yaabaa inay ka faa'iideysato daloolka amniga ee nidaamyada hawlgalka si fariin fudud ama emayl ay ugu heli karto qalabkeenna, oo markaas aan wax yar qaban karno. Laakiin waxaa laga yaabaa inay adeegsadaan barnaamijyo aan rasmi ahayn, shahaadooyin ka yimid asal shaki leh… Taasi waa sababta aan marwalba ugu adkeyno inaadan rakibin barnaamijyo aan ka iman dukaamada rasmiga ah.
Mar haddii aan cudurka ku qaadno xalka kaliya ee aan u harnay waa soo celinta qalabka oo u beddelo lambarkayaga sirta ah iCloud, Facebook iyo adeeg kasta oo kale oo aan dooneyno inaan ilaashanno. Sidan oo kale, lambarka marin-u-helka ee Pegasus uusan sii jiri doonin, iyo inuu dib noo saameeyo mooyee, ma awoodi doontid inaad ku hesho adeegyadeena.
Apple muxuu ka yidhi arrintan?
Bayaanka Apple ee ku saabsan arrintan waa mid jilicsan oo runti ah waxba ma xaqiijinayaan mana diidayaan.
Waxaan leenahay madal ugu badbaado badan adduunka. Waxaa jiri kara qalab u oggolaanaya in weerarro lagu qaado tiro yar oo aalado ah, laakiin waxtar uma leh weerarada baaxadda leh ee ka dhanka ah isticmaaleyaasheena.
Maqnaanshaha hadalo aad u ballaadhan oo xaqiijinaya in ay run tahay in qalabkaagu u nugul yahay weerarkan, iyo tan ugu muhiimsan, inta aad ka sugayso inay xal u helaan noocan ah khayaanada, waxa kaliya ee aan samayn karno waa wixii ka horreeyay adiga waxaan kuu tilmaameynaa: ka digtoonow codsi kasta oo aan ka iman App Store ama shahaado kasta oo nala waydiiyo inaan ku dhejino terminaalkeena.
Dembiilayaasha dadweynaha iyo ciqaabta
Qeybta ugu dhiigbaxa badan ee dhibaatadan oo dhan ayaa ah in shirkaddu si cad ugu faanto rakibidda sharci-darrada ah, iyada oo aan oggolaansho laga helin isticmaalaha, softiweerro xun oo mas'uul ka ah ururinta lambarrada helitaanka adeegyada iyadoo ujeedadu tahay nuqul ka mid ah xogta shakhsiga ah iyo ka iibinta kuwa ugu fiican . Laakiin wuxuu "ballan qaadayaa" inuu kaliya ka iibinayo dowladaha, ciqaabtoodu waa gebi ahaanba.
Ilaa goorma ayaa si gaar ah loogu xadgudbi karaa asturnaanta isticmaaleyaasha ogolaanshaha dawladaha oo dhan? Waa wax laga xumaado in Big Tech ay tahay inuu ka ilaaliyo sirta muwaadiniinta weerarada dowladda. dimuqraadi ah (ama maahan).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Pegasus waxay sheegaysaa inay marin u heli karto iCloud, FaceBook, Microsoft iyo adeegyo kale